ပြေးလမ်းချော်လေရော့သလား အမေစုရယ်? - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — November 27, 2012
” ကျွန်မတို့ ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုယင် နောင်လာမယ့် ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့၊ တကယ့်ကို လုံခြုံတဲ့၊ တကယ့်ကို လွတ်လပ်တဲ့ ၊ တကယ့်ကို တိုးတက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် ”
အမေစုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ စကားလုံးလှလှ အသုံးပြုသွားသော်လည်း ၄င်းစကား၏ နောက်ကွယ်၌ မြုပ်ကွက်လေးရှိ နေသလိုလို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မကြာသေးမီက ” ရခိုင်ပဋိပက္ခဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း “ ဟု အမေစုမှ အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာပေါင်းစုံမှ တစ်ဖက်စောင်းနင်း သတင်းဖော်ပြချက်တွင် ပါဝင်နေသော ဘင်္ဂါလီ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ၏ ဘောင် အပြင်ဖက်သို့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ခရီးကျွံလာပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(မုစ်လင်မ်)များအပေါ် ပေါက်လွှတ်ပဲစား အမြင်ထားရှိနေမှုများ/ ဆက်ဆံနေမှုများမှာ လက်တွေ့အခြေအနေအရ ငြင်း မရအောင် တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါသည်။
အမေစုကို ကျွန်တော်တို့မှ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ထာဝရ မြင်သွားချင်ပါသည်။ အမေစုအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူချင်နေပါသည်။ အမေစု၏ပြေးလမ်းမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစံနစ်သည် တရားမျှတမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးတန်ဖိုးထားမှု အပေါ်၌ အခြေတည်နေပါသည်။ အမေစုသည် ဝေဖန်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ကြားညှပ်နေပြီ၊ ခေါင်းခဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူပြည်သားအများစုက ရိပ်စားမိပါသည်။ ကိုယ်ချင်းစာပါသည်။ ထို့နည်းတူ မတရားခံနေရသောသူတို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ဘ၀၊ မျက်ရည်၊ ငိုရှိုက်ညည်းငြူချက်များအပေါ် အမေစုထံမှ စာနာမှုစကားလုံးလေးများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အပါအ၀င် ကမ္ဘာတစ်ခွင်က ငံ့လင့်နေကြကြောင်း အမေစု သတိမပြုမိလေရော့သလား ? အမေစု၏ စာနာမှုစကား တစ်ခွန်းသည် ရက်စက်မှုခြေလှမ်းများစွာကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ကြောင်း အမေစုကိုယ်တိုင် မသိလေရော့သလား ? ပန်းတိုင်မရောက်သေးသောအမေစု – လမ်းကြောင်းချော်ထွက်လေရော့သလား ?
အမေစုရယ် ……………….. ! အများစုဖက် မျက်စေ့မှိတ် ရပ်တည်လိုက်သည့်သူထက် အမှန်တရားပေါ် ရဲရဲတောက်ရပ်တည်သော ၂၁ ရာစုခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မြင်ရပါဦးမလား ၊ မြင်နိုင်ပါဦးမလား၊ မြင်ခွင့်ရှိလေဦးမလား ဟူ၍ မေးခွန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ………………… ။
Tags: DASSK, Justice, သူတို့အမြင်